Nbudata Auster J1 Autocrat FSX & P3D - Rikoooo
downloads 12 546
David Garwood. Ejiri ederede fotoreal dị elu nke Yiannis Katehis Tsetsas (ụgbọ elu Hellenic)
Asụsụ ngwugwu zuru ezu FSX-SP2 & P3D nke ụgbọ elu ndị ama ama nke J / 1 Autocrat. Yiri ihe nlere nke nwere ogwe aka na ahiri okwu, ihe ndozi ato kwesiri ekwesi, nke oma dika ihe nlere nke 3D. Nnukwu ekele Dave Garwood maka ọrụ dị mma.
The Auster J / 1 autocrat bụ ihe atọ na-seater njem ugbo elu ewepụtara Taylorcraft Auster Mk.V. Nke a rụpụtara ụgbọelu mụrụ ọtụtụ nkwekọrịta na-anọgide ihe ịga nke ọma British obodo ugbo elu ngwaahịa ozugbo mgbe ọgwụgwụ nke Agha Ụwa nke Abụọ.
Onye edemede: David Garwood. Ejiri ederede fotoreal dị elu nke Yiannis Katehis Tsetsas (ụgbọ elu Hellenic)